मनग्य कमाउन घरमै बसेर कसरी गर्ने सेयर कारोबार ? सजिलाे तरिका - News Book Online
यतिबेला सेयर बजारमा अनलाइन कारोबारको विषय चर्चामै छ । नेपालमा पहिलोपटक भित्रिएको पूर्ण अनलाइन स्वाचालित प्रणाली कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने द्विविधा सेयर बजारका लगानीकर्ताहरु माझ अझै पनि छ ।
घरमै बसीबसी सेयर किन्ने वा बेच्न सबैको चाहाना हुन्छ तर यसबारे ज्ञान नहुँदा धेरैलाई समस्या पर्ने गरेको छ । यदि तपाई पनि घरमै बसीबसी सेयर कारोबार गर्न चाहानु हुन्छ । तर, यसबारे जानकारी छैन भने हामी तपाईलाई बुझाउँछौं । नेपालमै पहिलो पटक सानिमा क्यापिटल तथा सानिमा बैंकको संयुक्तरुपमा एउटा नयाँ प्रोडक्ट लञ्च गरेको छ । जुन प्रोडक्टको नाम हो ‘थ्री इन वान खाता’ ।
सानिमा बैंकले नेपालमै पहिलोपटक ल्याएको थ्री इ–वान सेवाको प्रयोगबाट नै घर वा अफिसमै बसीबसी सेयर किनबेच गर्न सकिनेछ । यस सेवा अन्तर्गत ग्राहकहरुले आफ्नो घर, कार्यालय वा संसारको कुनै पनि स्थानबाट अनलाइनमार्फतबिना कुनै झन्झट सेयर खरिद तथा बिक्री गर्न सकिने छ ।
सानिमा क्यापिटल र सानिमा बैंकको सहकार्यमा सञ्चालित लगानी व्यवस्थापन सेवा अन्तरगतको यस योजनामा अनलाइनमार्फत ग्राहकहरुले खाता सञ्चालनको निवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएको छ । घर वा अफिसमा बसीबसी सेयर किनबेच गर्नका लागि यो सेवा सहज र उत्तम हुन्छ । यो सेवा लिएसँगै तपाईले घर अफिसमात्रै होइन संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पनि सेयर किनबेच गर्न सक्नु हुनेछ । यो सेवाको माध्यमबाट रोजगारी वा अध्ययनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि समेत उपयोगी बन्नेछ । सानिमा बैंकको यो सेवा लिनका लागि तपाईले अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्नु हुनेछ । यो सेवा लिन बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा जाने त्यसपछि वेबसाइटको माथिल्लो भागमा थ्री ईन वान छ, त्यहाँ क्लिक गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ फर्म देखिन्छ, माग भए बमोजिम तपाईको विवरणहरु भर्ने, व्यक्तिगत विवरणहरु तथा नागरिकता र फोटो अपलोेड गर्ने । यति गरिसके पछि आफ्नो नजिकको बैंक शाखा रोज्ने ।
बैंकले खाता खोल्ने शुरुवाती प्रक्रियादेखि खाता खोलिसकेको सम्पुर्ण जानकारीहरु इमेलमा प्राप्त हुनेछ । यस प्रक्रियामा तपाईले आफ्नो बचत खाता, डिम्याट खाता तथा ई–बैंकिङको विवरण पाउनुहुनेछ । यति गरिसके पछि एक पटकमात्रै तपाईले नजिकै रहेको सानिमा बैंक शाखामा पुग्नु पर्नेछ । आवश्यक प्रक्रिया पुगे पछि तपाईले घर, अफिस वा संसारको जुनसुकै ठाउँमा भएपनि सेयर किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ ।
बैंकको थ्री इन वान सेवा लिइसकेपछि तपाईको इमलेमा यूजरनेम र पासवर्ड प्राप्त हुनेछ । त्यहीँ युजरनेम र पासवर्डको माध्यमबाट घर वा अफिसमै बसेर किनबेच गर्न सक्नु हुनेछ । यसका लागि बैंकको वेभसाइटको मुख्य पेजमा गई ई–बैंकिङमा लग इन गर्ने । यसभित्र थ्री इन–वान खातामा क्लिक गरी सेयर खरिद वा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ । त्यहाँ अप्सनहरु देखिनेछन् । कहीँ कतै नबुझिए बैंकमा सम्पर्क गरेर सोध्नसमेत सकिने बैंकले जनाएको छ ।
थ्री ईन वान खाता सानिमा क्यापिटल र बैंकको सहकार्यमा सञ्चालित सेवा हो । साथ साथै यसका लागि सानिमा क्यापिटलले कारोबार राफसाफका लागि सेयर ब्रोकर कम्पनीहरुसँग थप सहकार्य गरेको छ । सेयर कारोबारको राफसाफ एकै कार्यदिनमा पुर्ण संचालित रुपमा हुने बैंकले जनाएको छ । सेयर खरिद वा बिक्रीको सफल कारोबार भए पश्चात् खरिदको हकमा पाँच कार्यदिनमा ग्राहकहरुको डिम्याट खातामा सेयर जम्मा गरिने बैंकले जनाएको छ ।
यसका लागि कानुनीरुपमै भएको व्यवस्था अनुसार ब्रोकर कमिशनको वापतको शुल्क र सानिमा क्यापिटलले न्युनतम शुल्कमात्रै लिन्छ । यस सेवा प्रदान गरे वापत बैंकले भने कुनै पनि शुल्क नलिने बताएको छ । अनलाइनखबरले लेखेकाे छ ।
भोलिबाट आउँदैछ तेह्रथुम पावरको रु. ८ करोडको आईपीओ
भदौ ८, २०७८ १४:५४ प्रकाशित